Akụkọ nke Thibaut de Lataillade na Martech Zone |
Edemede site na Thibaut de Lataillade
Thibaut De Lataillade GetApp NGP, nwere ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ na njikwa azụmahịa, ahịa, na ịzụ ahịa n'okpuru eriri ya. O nwere ndekọ egwu pụtara na ígwé ojii, ngagharị, ahịa dijitalụ, CRM, ahịa, ire ahịa, na atụmatụ uto. Thibaut ejirila ọkwa nchịkwa na onye isi na nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ dị ka Cegedim na SAP.
Olee otú mmalite nwere ike isi merie ihe ịma aka teknụzụ ahịa nkịtị
Monday, November 8, 2021 Fraịdee, Nọvemba 12, 2021 Thibaut de Lataillade
Okwu ahụ bụ́ “mbido” mara mma n’anya ọtụtụ ndị. Ọ na-akpalite onyonyo nke ndị ọchụnta ego na-achọsi ike na-achụ echiche nde dollar, oghere ọfịs mara mma na uto na-enweghị njedebe. Mana ndị ọkachamara na teknụzụ maara eziokwu na-adọrọ adọrọ dị ntakịrị n'azụ echiche mmalite: naanị inweta akara n'ahịa bụ nnukwu ugwu a ga-arịgoro. Na GetApp, anyị na-enyere ndị mbido na azụmaahịa ndị ọzọ aka ịchọta sọftụwia ha kwesịrị itolite na iru ebumnuche ha kwa ụbọchị, anyị amụtala